ကြှနျုပျတို့၏အလုပျအတှအေ့ကွုံမြားကို｜Job'sWorld for all of Asia
နိုင်ငံခြားသားလူမျိုးများအတွက်အလုပ်ပြောင်းရွေ့ ခြင်း ၊ အလုပ်ရှာခြင်းများကို ဂျပန်ကုမွှဏီများမှအလုပ်ခေါ်စာများကို Job's World တွင်ရှာဖွေနိ်ုင်ပါသည်။
အလုပ်ပြောင်းခြင်းကိုယ်တွေ့ အတွေ့ အကြံ
အခုချိန်ထိအလုပ်မိတ်ဆက်ပေးနေသောဗီဇာများမှာ.၊ပညာတော်သင်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ . မှီခှိုဗီဇာများ . အေးကျူးဗီဖာများ . တေးကျူးဗီဖာများ . ဂျပန်လူမျိုးနဲ့ လက်ထပ်ထားသောဗီဇာများဖြင့်နေထိုင်သူများဖြစ်ပါသည်။
Yuryo Rojin Home ,Nerimaku,Tokyo
ယမ်းသောင်3း00 (တစ်ပတ်5၇က်) သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်း
ဗီဇာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အလုပ်ချိန်သက်မှတ်ခြင်းတို့နှင့်ပက်သက်ပြီးနားမလည်ခဲ့ပေမဲ့ Link Staff ရဲ့အကူအညီဖြင့်အဆင်ပြေစွာဗီဇာပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းLink Staffမှမိတ်ဆက်ပေးသောနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများကိုလည်းအလုပ်ခန့်ရန်စဉ်းစားလျက်ရှိပါသည်။
ကျောင်းပြီးပါမည်။ အလုပ်ရှာဖွေနေဆဲကာလတွင် Linkstaff ကုပ္မဏီနှင့်တွေ့ ဆုံခဲ့ပါသည်။ အလုပ်မ၀င်ခင်
အထိ အချိန်ညှိခြင်းများ ၊ အလုပ်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗီဇာတိုးဖို့ အတွက်အကူအညီများ ထောက်ပံ့မှုများရရှိခဲ့
ပါသည်။ တာဝန်ခံက ကိုယ့်လူမျိုးတရုတ်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် စကားပြောရဆိုရတာ တော်တော်ကို အဆင်
ပြေပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောသိချင်သောအကြောင်းအရာများကိုပြောပြတိုင်ပင်လို့ လဲရခဲ့ပါတယ်။
တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၊ ယမ်းသောင်း200 (တစ်ပတ်5၇က်) သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်း
သက်ပြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်သည့်အတွက် Link Staffမှနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ပေးခြင်းကိုလက်ခံလျက်ရှိပါသည်။
အလုပ်ဝင်တဲ့ပထမဆုံးနေ့တွင်လည်းအတူတူလိုက်ပါဘာသာပြန်ပေးမှုကြောင့်အခုလက်ရှိချိန်ထိ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အခက်အခဲမရှိ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
(လွယ်ကူသောနေ့စဉ်သူံးစကား)(Ｎ3Level) Cetificate မရှိ
နိုင်ငံခြားသားပညာတော်သင်ကျောင်းသားများကိုလက်ခံဖို့ဆိုရင်ဖြင့်အချိန်ကတစ်သတ်မတ်တည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ဇယားညှိရန်ခက်ခဲသဖြင့်ဝန်ထမ်းခန့်ရန်အတွက်မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။Link Staff ရဲ့အကူအညီဖြင့်အလုပ်ဝင်နိုင်မည့်အချိန်နဲ့ရက်များကိုကြိုတင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားသားပညာတော်သင်ကျောင်းသားကိုပထမဆုံးလက်ခံခဲ့ပါသည်။လက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်းအစီတကျဆောင်၇ွက်ပေးမှုကြောင့်လက်ရှိတွင်လည်းနောက်ထပ်တစ်ယောက်မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက်လည်းတောင်းဆိုထားပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံကိုပညာတော်သင်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စက်ရုံနှင့်စားသောက်ဆိုင်တွင်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်ကစက်ရုံအလုပ်ကိုသိပ်မကြိုက်တဲ့အတွက်link Staff ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါသည်။မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တာဝန်ခံမှသက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကိုပထမဆုံးစပြီးလုပ်တဲ့အတွက်အလုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာများနှင့်ပက်သတ်ပြီးနားမလည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝန်ခံမှအလုပ်နှင့်ပက်သတ်ပြီးသေချာရှင်းပြပေးခဲ့မှုကြောင့်လက်ရှိတွင်လည်းအခက်အခဲမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။